Football Khabar » सिरी ए : आज इन्टर मिलान र युभेन्टसको ‘महाभिडन्त’ हुँदै, कसले मार्ला बाजी ?
सिरी ए : आज इन्टर मिलान र युभेन्टसको ‘महाभिडन्त’ हुँदै, कसले मार्ला बाजी ?
इटालीको घरेलु लिग सिरी ‘ए’ फुटबलमा आज सिजनकै पहिलो सबैभन्दा ठूलो खेल हुँदैछ । लिगका उपाधि दाबेदार दुई टिम इन्टर मिलान र युभेन्टस आमनेसामने हुँदैछन् । यो खेलका लागि युभेन्टस मिलानको घरेलु मैदानमा उत्रिँदैछ ।
आजको खेल यी दुई टिमका लागि को लिग लिडर रहने भन्ने दौडका लागि पनि हुनेछ । किनभने, मिलान यो सिजन शतप्रशित विजयी यात्रामा रहँदै ६ खेलबाट १८ अंक जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा छ । साबिक विजेता युभेन्टस समान खेलबाट अपराजित रहँदै १६ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा छ । यी दुई टोलीबीच हाल मात्रै २ अंकको मात्रै अन्तर छ ।
तसर्थ, आज युभेन्टस मिलानलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराएर यो सिजन पहिलोपटक लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा छ । यता, लिगमा विजयी यात्रामा रहेको मिलान आज साबिक विजेतालाई आफ्नो घरमा स्तब्ध बनाएर ३ अंक जोड्दै लिगमा ५ अंकको स्पष्ट अग्रता बनाउने दाउमा छ ।
आजको खेलमा युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पाउलो डिबाला, गोन्जालो हिगुइनलगायत मुख्य केन्द्रमा हुनेछन् । मिडफिल्डमा मिरेलाम पियानिच, आरोन राम्सी, आड्रेन राबिओटलगायत खेलाडी सुरुआती टोलीमा हुने सम्भावना छ ।
यता, मिलानको टोलीमा आज नयाँ खेलाडी रोमेलु लुकाकु, एलेक्स सान्चेज, लौटारो मार्टिनेजले युभेन्टसको पोस्ट हान्ने जिम्मा पाउनेछन् । खेल नेपाली समयअनुसार राति १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
लिगमा आजै साँझ ६ः४५ बजेबाट रोमा र क्याग्लिअरी, सोही समयमा बोलोग्ना र लाजियो, ९ः४५ बजेबाट टोरिनो र नापोलीको खेल हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति १९ आश्विन २०७६, आईतवार ११:५२